>Aung Way, Maung Lun Ni & Thit Kaung Eain – Tribute to Kyi Aung | MoeMaKa Burmese News & Media
>Burmese Beggers Children to become School Children
>Kyaw Thu – Than Myint Aung’s Father passes away
>business with the oil carrier in Rangoon
ကျားဖမ်းသူ ရွှေဘိုမြင်း ဦးညွတ်ခြင်း
အောင်ဝေး၊ မောင်လွမ်းဏီ၊ သစ်ကောင်းအိမ်
ငို စမ်း ဒီနွေ
ဓားကို ထမ်းလို့ 
ကျားဆိုး အရင်ဖမ်းခဲ့ပြီ။ ။
ရဲဘော်တပည့် - အောင်ဝေး
(မတ် ၂၈ ၊ ၂၀၀၉)
“ဇော်ဂျီက ဂေါ်ကီ ဆိုရင်
တင်မိုးက ဗင်ဂိုးတဲ့လား … ဟား ဟား ဟား
ရုပ်သံလှိုင်းမှာ အရုပ်တွေက သစ်သစ်လာ
ပျံတာတွေပဲ တွေ့တွေ့ နေရတော့မှာလား။
သွားနှင့်တော့ တင်မိုးရေ … တဲ့။
ငါ လိုက်ခဲ့ပြီ ဘဂျမ်းရေ …
ငါ ထားခဲ့ပြီ ဘဂျမ်းရာ
ကဗျာ၊ အမြွှာ၊ အညာ၊ တမာ
အင်းဝ ပြန်ပို့ပေးပါနော်။ ။
(၂၈၊ ၃၊ ၀၉)
သစ္စာရှာဖို့ ငါ မြင်းစီးမယ်…
ကဗျာသုဂတိကို လားသူငဲ့ …
သစ္စာရှာဖို့ သူ … မြင်းစီးထွက်သွားပေါ့။ ။
(၂၈. မတ်လ. ၂၀၀၉)
သရုပ်ဖော်ဂုဏ်ပြု – ပန်းချီမင်းကျော်ခိုင်